Ngaba ufuna ukwazi indlela yangempela yokusebenza impumelelo? "Imfuno yokuba yinto enhle ayixhomekeke ekubeni unababukeli." Kuzwakala kulula, kodwa kukufanele ukuthanda wena, kwaye onke amaphupha kunye neeminqweno ezifihlakeleyo ziya kuzaliseka. Kutheni uthanda wena xa kukho abaviwa abafanelekileyo ngokubanzi? Tusovka, abafana abathandekayo, intombi zakho - imbono yabo ibaluleke ngakumbi kuwe kunakho? Ubani osibetha iinwele zakho kusasa kwaye ufunde ukudanisa umbhobho? Kwaye kuya kwenzeka ntoni ukuba inkampani ishintshe i vector kwaye i-hustle ayifuni? - Ngaba uyayeka?
Kakade, ukuba "njengomntu wonke" kulula ngakumbi kunokuba ube nembono. Kodwa ukuba ngokungazelelwe ungakuthandi ukuhamba nokuhamba, ke omnye wesibini - okanye uza kuba ngumfel 'ukholo, okanye ekugqibeleni, wanquma ukuvusa unkulunkulukazi wakhe ongaphakathi.
Ixesha eliphakamileyo! Kuya kukuqinisa, kuba uthi: "Ndiyenaxanduva lokuba kwenzeke kum," ufuna inkalipho eninzi kunokuba ubuyisele inkokhelo egameni lenyanga. Kodwa ubomi buya kukhangeleka ngokufanayo: amathuba amaninzi okuphula i-bhanki ibe yinto efanelekileyo. Kutheni uzifanisa nomnye umntu? Thelekisa kunye nawe - njengokuba wawulo izolo okanye ngeveki edlulileyo. Nangona kunjalo, ukuba uqala ukutshintsha kwaye wenze ngokusemandleni nangokomxholo, umngcipheko wokungaphumeleli uba mkhulu kunokuba uhlala kwindawo enye. Kodwa ngubani owathi ukuhluleka kuyintlekele? Khawujonge nje njengendlela yokufumana indlela engcono ukuyiyeka. Kodwa indima yenkedama ehlwempuzelayo ekhalazayo kwisikrini-ithi, kwaye akukho mali ye-crystal uggies, kwaye ukubonakaliswa kwesibuko ngandlela-thile akunjalo-kukulungele ngakumbi kwii-slippers ozifunayo. Unokulindela ukuncoma kunye novelwano, kwaye xa ukugeleza kuphuma - thabatha umoya ophezulu kunye nesobho ngokukhawuleza kwakhona. Enye inkathazo kukuba awuyi kutshintsha nantoni na.
Uyabona , yintoni umcimbi. Le nto ayiyona ingcamango, kodwa akukho mqondiso. Oothixokazi bazidala ngokwabo, kwaye kuya kuwe ukuba uza kuba njani kusasa. Ukudlala i heroine enzima kakhulu, kwantoni naxa wonke umntu utyhafile ngokuthuthuzela into enhle, kwaye uya kushiywa wedwa kunye neengxaki zakho. Akunjalo ngenxa yokuba abahlobo bakho bangathembeki, kodwa ngenxa yokududuzeka yinto enye, kwaye ukunyamekela ngenye indlela. Akukho mntu unyanzelekile ukwenza oku kuwe, nokuba ufuna ngokwenene. Yaye, bonke abantu ngaphandle kwakho banokubona ukuba awufuni ukuyicombulula ingxaki, kodwa ukuhlupheka kwaye ngenxa yolu thuba unamathele kwiindaba ezintsha ezibuhlungu.
Mhlawumbi lixesha lokuba wena nonkulunkulukazi wakho ongaphakathi ujike enye indlela? Apho, apho bengenaso isikhalazo, kodwa benze kwaye ungazami ukuchaza izikhalazo ebomini babo ngokungabikho kwezikhumba ze-ugg. Ngenxa yokuba kunokwenzeka ukufumana imali kwiimigodi, ukucinga - ukulungisa. Kwaye isikhulu siya kuba lula ukukubona, ukuba kunye naye, ubuncinane uyazi, kwaye ungadli emva, ukufihla kwindawo yokukhusela. Ewe, kunokwenzeka ukuba akusiyo yonke iminqweno yakho eya kuzaliseka kusasa. Kwaye, kuphephe kakhulu kwaye kulula ukugubha kunokuhamba endaweni ethile. Ngaba ngandlela-thile ungakhangeli ngathi intombazana ekhuselekileyo kwaye ucinga ukuba kukungabi nabulungisa? Emva koko ndixelele ngokunyanisekileyo: yintoni oyenzile ukuze ufunde indlela yokwenza umkhangeli kwaye uhlale ukhangeleka? Ngaba ulungele ukuthatha inyathelo elitsha imihla ngemihla kwizinto ezifanelekileyo kunye namaphupha akho - ngokungathandabuzekiyo, kungekho nkohliso?
Khumbula: izinto ezininzi oza kuzithatha ezandleni zakho, iimfuno ngakumbi ziya kuzaliseka. Kwaye into ecacileyo kukuba awuyi kuzifumana kwindawo ephukileyo. Kuba ibali lakho alikho malunga nokulahleka nokuzisola. Ibali lakho - malunga ne-Olympus ekhazimulayo!
Ngelixa uhlakulela kwizinto ezimbi, ixesha elidlulileyo ongayisebenzisa kwenye into. Bhala phantsi iminqweno yakho. Emva koko udwebe imephu - indlela yokufikelela kubo.
Zibekele iinjongo zangempela zomnqweno. "Ndifuna ukuba yi-Miss World ngomso" ayiyi kusebenza. "Ndifuna ukunciphisa inqeni ngamasentimitha amathathu, sifunde ukuhamba kwizithende zakhe, ndizenzele iVenus Ukuthobela kwaye ungakulibali ukusebenzisa i-scrub" - kungcono. Bhala into oyenzayo ukuze ufike kwiinjongo. Yaye ungagcini, kuyimfuneko ukuba usebenze ngokwakho kwaye ukubunjwa komfanekiso wakho akuyimfuneko.
Qinisekisa ukulungiselela iveki-umsebenzi oqinileyo kwaye akukho mnandi kodwa akukho mntu wenze kakuhle. Ufumana amawaka amabini ama-pretexts, nje ukuba ungenzi nantoni na yinyani? Akukho nto engalunganga ngokuqonda: Injongo oye ichaze, eqinisweni, awunomdla. Yivume kwaye uqhube phambili! Intloko engcolileyo, izipikili ezingenasiphako kunye neentsholongwane ezingaphezu kweendawo apho akufanele kube khona-kwaye konke oku kukhwankqisayo kuba nje uchitha yonke ilanga ukhangele iTV xa ulala embhedeni wakho owuthandayo? Isihloko esithandwayo esithi "Miss World" sele sekho ephaketheni lakho, ewe. Injongo yakho iya kuzaliseka ngokukhawuleza, nje ukuzithanda, kwaye onke amaphupha aya kuzaliseka.
Akukho nto ephosakeleyo ngokulinganisa ngokufanelekileyo yonke into engenayo. Kodwa ukuba ubeka ityala kwakhona ekubambeni okwesithathu, kuba awukwazi ukugqiba isigqibo nganoma iyiphi indlela ... Masivume: ubuncinane uzame! Ungayithandi - ukubuyisela.
Ukutya okudibeneyo okanye isidlo sasemini: indlela efanelekileyo yokuqokelela intsapho
Indlela yokuchonga uhlobo lomfazi ngeyure
Yintoni yena - umfazi ohlakaniphile?
Risotto nge zucchini ne sikwashi
IParele yaseMzantsi Afrika: ubuhle kunye neendwendwe zaseKapa
Indlela yokuchonga oko kuza kubakho kwi-noveli yeofisi?
Ukuphunga impepho kunye nentuthu
Imithetho ebalulekileyo yokunyamekela isikhumba esikhulileyo
Masithethe ngeRussified "Feng Shui"
Izingozi kunye nemiphumo emibi yezibilini zebele
Igadi yasebusika kwindawo yokuhlala: khangela amathuba kwaye ukhethe isitayela
Indlela yokuthatha i-amino acids ngokuchanekileyo
I-Horoscope ye-Lion-Woman ngo-Oktobha 2016